Kali Linux 2020.1 tonga miaraka amin'ny fanovana vitsivitsy, ao anatin'izany ny fidirana | Avy amin'ny Linux
vao haingana Navoaka ny kinova Kali Linux 2020.1 vaovao, izay distro natao ho an'ny rafitra fitsapana marefo, fanaraha-maso, famakafakana angon-drakitra tavela ary fantaro ny vokadratsin'ny fanafihana mahatsiravina. Kali misy ny iray amin'ireo fifantina fitaovana feno indrindra Ho an'ny matihanina momba ny fiarovana IT: Avy amin'ny fitaovana hanandramana ny rindranasa an-tranonkala sy ny fidiran'ny tamba-jotra tsy misy taratra ka hatramin'ny fandaharana mamaky angona avy amin'ny sombin-taratra RFID ID
Ny kit dia misy fanangonana ny fitrandrahana sy ny fitaovana fanamarinana fiarovana maherin'ny 300, toa ny Aircrack, Maltego, SAINT, Kismet, Bluebugger, Btcrack, Btscanner, Nmap, p0f. Ankoatr'izay, ny kitapom-bokatra dia misy fitaovana hanafainganana ny fisafidianana tenimiafina (Multihash CUDA Brute Forcer) sy ny lakilen'ny WPA (Pyrit) amin'ny alàlan'ny fampiasana teknolojia CUDA sy AMD Stream, izay ahafahanao mampiasa ny karatra horonantsary NVIDIA sy AMD. asan'ny solosaina.
1 Inona no vaovao ao amin'ny Kali Linux 2020.1?
2 Sintomy ary mahazoa Kali Linux 2020.1
Inona no vaovao ao amin'ny Kali Linux 2020.1?
Miaraka amin'ny famoahana ity kinova vaovao ity, amin'ny alàlan'ny default ny mpampiasa dia omena eo ambanin'ny mpampiasa tsy malaza (nanomboka teo aloha dia natao faka avokoa ny asa rehetra).
Ankoatr'izay novaina ny mari-pahaizana momba ny fidirana amin'ny rafitra, toy ny teo aloha fa tsy mpampiasa: root
Ireto manaraka ireto dia ampiasaina izao:
Ary koa, momba ny fanangonana samihafa an'i Kali miaraka amin'ny latabatr'izy ireo manokana, izao dia soso-kevitra fametrahana fametrahana tokana manerantany miaraka amin'ny fahaizana misafidy latabatra izay hofidin'ny mpampiasa arakaraka ny tsirony.
Amin'ireo safidy natolotra, afaka mahita isika XFCE, Gnome, KDE, Mate, LXQT. Raha atotaly dia sary telo izao no atolotray: fametrahana feno, kinova mivantana ary sary kely ho an'ny fametrahana amin'ny tambajotra.
Nanova ny fisehon'ny mpametraka sary.
Ho an'i Gnome, misy lohahevitra famolavolana vaovao misy, azo alaina amin'ny kinova maizina sy maivana.
Nampiana sary masina vaovao ho an'ny fampiharana tafiditra ao.
Ny maody Kali Undercover dia nohamarinina, manahafana ny layout Windows, mba tsy hampisy ahiahy rehefa miasa miaraka amin'ny Kali amin'ny toerana be olona.
Ny firafitra dia misy cloud-enum, emailharvester, phpggc, sherlock ary splinter vaovao.
Fitaovana nesorina izay mila Python 2 hiasa.
Amin'izany fotoana izany, Navoaka ny famotsorana NetHunter 2020.1, tontolo iainana ho an'ny fitaovana finday miorina amin'ny sehatra Android miaraka amina fisafidianana fitaovana hizaha toetra ny rafi-pitantanana.
Amin'ny NetHunter, azo atao ny manamarina ny fampiharana ny fanafihana manokana ho an'ny findays, ohatra, maka tahaka ny fiasan'ny fitaovana USB (keyboard BadUSB sy HID, maka tahaka ny adapter tambajotra USB izay azo ampiasaina amin'ny fanafihana MITM, na kitendry USB izay manolo ny solo-toetra).
Ary koa afaka mamorona teboka fidirana an-tsokosoko (MANA Malicious Access Point) NetHunter dia mametraka amin'ny tontolon'ny sehatra Android mahazatra amin'ny endrika sary chroot izay mihodina amina kinovan'ny Kali Linux.
Fanatsarana lehibe amin'ny fanombohana nataon'i NetHunter 2020.1 Izy io dia ny fanomanana ny fanontana Rootless, izay tsy mitaky fidirana amin'ny faka ao amin'ilay fitaovana.
Sintomy ary mahazoa Kali Linux 2020.1
Ho an'ireo izay liana te-hanandrana na hametraka mivantana ilay kinova vaovao an'ny distro amin'ny solo-sain'izy ireo, tokony ho fantatr'izy ireo fa afaka maka sary ISO feno izy ireo (2.7 GB) na sary mihena (2 GB) izay efa Azo alaina ao amin'ny tranokala ofisialy ny fizarana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Kali Linux 2020.1 tonga miaraka amin'ny fanovana vitsivitsy, anisan'izany ny fidirana
Diaz Roberto dia hoy izy:
Ity kinova ity dia labyrintine ho ahy satria tsy azo atao ny misafidy ny fiteny ary aleoko ilay estetika teo aloha
Valiny tamin'i Diaz Roberto
Thomas dia hoy izy:
Diso tanteraka, tsy manomboka amin'ny kali / kali
Mamaly an'i thomas
Ny kinova vaovao an'ny FreeNAS 11.3 dia eto, fantaro ny fanovana lehibe indrindra